Sheekh Shariif oo si lama filaan ah uga hadlay xuska 18-ka May ee Somaliland - Caasimada Online
Home Warar Sheekh Shariif oo si lama filaan ah uga hadlay xuska 18-ka May...
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa si lama filaan hambalyo ugu diray reer Somaliland oo maanta u dabaal dagaya 18-ka May oo ah maalintii ay ku dhawaaqeen madax-banaanida ay ka go’een Soomaaliya ee aan weli aqoonsiga helin.
Sheekh Shariif ayaa reer Somaliland ku bogaadiyey nabada iyo xasiloonida siyaasadeed ee ay dhidibaha u taageen mudada 30-ka sanno ah.
“Waxaan hambalyo u dirayaa walaalaha Somaliland oo xusaya 18 May meel kasta oo Caalamka ay ka joogaan, anigoo ugu tahniyadeynaya nabadda, xasilloonida Siyaasadeed iyo hirgalinta nidaamka doorashada qof iyo cod ee ay ku guulaysteen,” ayuu yiri.
Waxa uu hoosta ka xariiqay in qadiyadda Somaliland iyo xaalkeeda uu yahay arrin masiiriya, islamarkaana ay muhiim u tahay dib u yagleelida dowladnimo lagu wada kalsoon yahay oo Soomaaliyeed, sida uu hadalka u dhigay.
Madaxweynihii hore ee dalka ayaa sheegay in loo baahan yahay in lala fariisto hogaanka Somaliland oo matalaya bulshadooda, si looga qanciyo 30 sanno ka hor dhibaatadii gaartay, iyada oo laga garaabayo arrintaas.
“Waxaan aaminsanahay in qadiyadda Somaliland iyo xalkeeda ay tahay arrin masiiri ah, muhiimna u ah dib u yagleelidda dowladnimo lagu wada kalsoonyahay oo Soomaaliyeed, taasoo nooga baahan in xil gaar ah la iska saaro, iyadoo lama huraan ay tahay in lala fariisto, la dhegeysto si looga qanciyo 30 sano ka hor dhibaatadii gaartay oo garowshiyo nooga baahan.”
“Waxay tusaale wanaagsan u noqdeen mudadaas 30ka sanaa Soomaalida inteeda kale, iyagoo ku guulaystay sugidda Amniga, Horumarka Bulshada iyo in dadku ay doorasho galaan iyagoo xulanaya cidda hogaaminaysa.”
Sheekh Shariif ayaa ugu dambeyntiina si weyn ugu amaanay Somaliland hanaanka doorashooyinka qof iyo cod oo ka hirgelay deeganadeeda, ayada oo shacabku doortan cisa qabaneysa hogaankooda.
Si kastaba, Somaliland ayaa maanta u dabaal-degaysa sanad-guuradii 30-aad ee kasoo wareegtay xiligii ay ku dhawaaqeen madax-banaanida ay ku doodaan, waxayna sanadahaas dunida ka baadi-goobeysa aqoonsi caalami ah.